Real Madrid oo diyaarineysa xaflad weyn si ay u soo dhaweyso heshiiska la sugayo ee Kylian Mbappé – Gool FM
(Madrid) 27 Agoosto 2021. Wargeyska “Marca” ee ka soo baxa Spain, ayaa qoray in Real Madrid ay diyaarineyso xaflad weyn si ay u soo dhaweyso Kylian Mbappé oo heshiiskiisa la filayo inay dhameystirto Los Blancos, saacadaha soo aadan.
Kylian Mbappé ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah baritlaameedyada ugu muhiimsanaa ee Real Madrid dhowr sano, xagaagana wuxuu ahaa bartimaameedka kaliya Los Blancos ee suuqa kala iibsiga.
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay sugayso bal inay Paris Saint-Germain aqbali doonto dalabkeeda cusub ee ah 170m (£ 146m), si ay kaga qaadato Kylian Mbappé iyadoo kooxda reer Spain ay sare u qaadayso baadi-goobka ay ugu jirto weeraryahanka reer France.
Wargeyska ayaa wuxuu tilmaamay in maamulka Real Madrid ay qorsheynayaan inay ugu dabaaldegaan heshiiska Kylian Mbappe qaab ku habboon, sidaas darteed waxay heystaan xulashooyin badan oo ay sidaas ku sameyn karaan.
Wararka ayaa waxay tilmaamayaan in Real Madrid ay ku fikireyso qaban qaabinta xaflad weyn si ay u soo dhaweyso Kylian Mbappé, kaddib fasaxa kulammada caalamiga ah, gaar ahaan 9-ka ama 10-ka bisha September ee soo socota.
Wargeyska ayaa wuxuu sidoo kale tilmaamay in xulashada saddexaad ay noqon doonto in Kylian Mbappé loo soo bandhigo taageerayaasha kahor kulanka Real Madrid iyo Celta Vigo, kaasoo la qorheynayo inuu qabsoomo Sabti 11-ka September.
Dimitar Berbatov oo kula taliyay Van de Beek inuu ka tago kooxda Manchester United